Gossip News | Filmy Bazar in Nepal
तौल बढेर मोटी भएपछि चिन्तामा नायिका वर्षा,तौल घटाउनकै लागि अष्ट्रेलिया ?
फिल्मीबजार,१५ पौष २०७४,काठमाण्डौ । नायिका बर्षा राउतले ‘छक्का पन्जा २’अघि पनि धेरै म्युजिक भिडियो,चलचित्र र टिभिसि गरेकी थिईन् । तर,दर्शकमाझ क्लिक हुन सकिरहेकी थिईनन् । राम्रो ब्यानरको प्रोजेक्ट खोज्दै गर्दा चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ मा सह नायिकाको रुपमा काम गरे पनि उनी सो चलचित्र बाट क्लिक भईन् । जसको कारण हिजो आज चलचित्र पाईरहेकी छिन् ।यसै क्रममा उनको पछिल्लो चलचित्र ...	Read More »
आखिर के चाहन्छिन् शुष्मा !
फिल्मीबजार, १५ मंसिर २०७४,काठमाण्डौ ।केहि चलचित्रमा काम गरेसकेकी अभिनेत्री सुष्मा कार्की हट सिन दिने नायिकाको सुचिमा पर्छिन् । कुनै बेला प्रेमी निरनको कारण चर्चाम थिईन् । समय समयमा हट डान्सका कारण उनको चर्चा चुलिने गर्छ ।लुटको ‘उध्रेको चोली’बोलको आईटम गीत बाट बुम भएकी सुष्माले राजु गिरी लगायतको केहि छाडा शैलीकै चलचित्रमा समेत काम गरिन् । उनलाई रुचाउने मन पराउने दर्सकहरु ...	Read More »
गसिप । प्रियंकाले दिपक बोकिन्,निताले श्याम
फिल्मीबजार, २४ कार्तिक २०७४,काठमाण्डौ । अभिनेत्री प्रियंका कार्की पछल्लो समयकी ब्यस्त अभिनेत्रीको सुचिमा पहिलो स्थानमा पर्छिन् । जति उनी कामले चर्चामा आउने गर्छिन् त्यसभन्दा बढी उनको प्रेम सम्बन्धले चर्चामा आउने गर्छिन् । केहि समय अघि देखि नायक आयुषमान देशराज संगको प्रेम सम्बन्धका कारण यि दुबै चर्चामा छाए । हालसालै फेरी उनी नेपालको फिल्म रिलिजको प्रमोशनलाई सहयोग नगरी भारतमा प्रेमी आयुषमानलाई ...	Read More »
गसिप : संगै देखिएनन् बेनिषा र रिमा
फिल्मीबजार,२६ कार्तिक २०७३ काठमाण्डौ, मिल्ने साथीको रुपमा परिचित छन् , नायिकाहरु केकी अधिकारी , बेनिषा हमाल र रिमा विश्वकर्मा । यी तिनको मित्रताको चर्चा निकै हुने गर्छ , फिल्मनगरीमा । तर यतिबेला यी मध्यका दुइ बेनिषा र रिमाको मित्रता भने पहिलो जस्तो नरहेको हो कि भन्ने चर्चा फिल्मनगरीमा चलन थालेको छ । शुक्रबारबाट आयोजित एकादेशमा इन्टरनेशनल शर्ट फिल्म फेस्टिभलमा यी ...	Read More »
March 24, 2016	Comments Off on फिल्म खेलेर पनि चम्कन नसकेका यी पाँच अभिनेत्रीहरु
फिल्मीबजार,११ चैत्र २०७२,काठमाण्डौ । चलचित्र उद्दयोगमा सफल अभिनेत्री बन्छु भनेर सुनौलो सपना देख्नेहरु प्रशस्त छन् । तर,सफल कमै मात्र भएका छन् । उद्दयोगमा यस्ता अभिनेत्रीहरु पनि छन्,जसले संख्यात्मक हिसाबले धेरै सिनेमा खेले तर ब्यापारिक हिसाबले एउटा पनि सफल हुन सकेन ।यस्तै सिनेमा कम खेल्ने तर एउटै सिनेमाले परिचय बनाएका अभिनेत्री पनि छन् । यसैगरी सिनेमा खेलेका तर सिनेमा घर देख्न ...	Read More »
प्रियंका र दह्याङ राईको यो कस्तो निकटता ?
फिल्मीबजार,५ चैत्र २०७२,काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दुई पात्र दह्याङ राई र प्रियंका कार्की बढी चर्चामा छन् । अभिनेता राई र अभिनेत्री कार्की सहभागी हुने गरेका कार्यक्रममा यि दुईका चर्तिकलाले सहभागीहरु पनि चकित हुने गरेका छन् ।कहि कतै दह्याङलाई देख्ने बितिक्कै प्रियंका हाम फालेर चुम्बन गर्न जान्छिन् । अनि कपाल मिलाईदिने देखि लिएर दह्याङको हरेक कुरामा ख्याल गर्ने ...	Read More »
गसिप । भुवन हिरोईन ताक्ने,हिरोईन अनमोल ताक्ने कस्तो खिचडी ?
फिल्मीबजार,७ फाल्गुण २०७२,काठमाण्डौ । अहिले भुबन केसी निर्देशित फिल्म ‘ड्रीम्स’ को चर्चा चल्न थालेको छ । निर्माण पक्ष अहिले चलचित्रको प्रचारमा ब्यस्त हुदै गर्दा हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमा भुबन र अनमोलले बोलेका स्टेटमेन्टले चलचित्र बृतमा गसिप बन्न थालेका छन् ।फिल्मको अडियो बिमोचनमा समारोहमा अभिनेता भुवन केसीले डेब्यु हिरोईन साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको खुलेरै प्रसंसा गरे । अरुको कार्यक्रममा बिरलै सहभागी ...	Read More »
टेलिभिजन कार्यक्रममा रिसाए सेट बाटै बाहिरिए अभिनेता सरोज खनाल (भिडियो)
फिल्मीबजार,२५ आश्विन २०७२,काठमाण्डौ । Subscribe us on YouTube:- Click Here to Watch Entertaining Videos करिब १७ बर्ष पछि अमेरिका बाट नेपाल फर्किएका अभिनेता सरोज खनाल एक नेश्नल टेलिभिजन च्यानलमा अन्तर्बाता दिने क्रममा रिसाएर अन्तर्बाता सेट बाटै बाहिरिएका छन् । फन्नि शैलीको अन्तर्बाता भन्ने कुरा खनालले बुझ्न नस्कदा अभिनेता खनालको रिसलाई टेलिभिजन प्रस्तोताले छताछुल्ल बनाएकी छिन् ।‘भेजा फ्राई’नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा अभिनेता ...	Read More »
साभार | फिल्म अवार्डका स्क्यान्डल | यस्तो छ नेपाली फिल्म अवार्डको नालीबेली
१६ आश्विन २०७२,काठमाण्डौ । केही वर्षयता नेपाली सिनेजगत्मा अवार्डको ‘फेसन’ बढेको छ । बर्सेनि दिइने अवार्ड मात्रै नौवटा छन् । अवार्ड दिनेको सूचीमा गत वर्षदेखि राष्ट्रिय विकास बोर्ड पनि थपिएको छ । चलचित्र विकास कम्पनीले तीन वर्षयता ‘एनएफडिसी नेसनल फिल्म अवार्ड’ प्रदान गर्दै आएको छ । तर, अधिकांश यस्ता अवार्ड विवादको घेरामा नतानिइरहन सकेका छैनन् ।केही दिनअघि नेपाल चलचित्र प्राविधक ...	Read More »
७ आश्विन २०७२,काठमाण्डौ । -अभिनेत्री पुजा शर्मा अभिनयमा लाग्ने सोच नै थिएन । कलेज पढ्दै थिएँ । अचानक ‘अफर’ आयो ‘थ्री लभर्स’को । त्यतिवेला मलाई अभिनयबारे केही थाहा थिएन । चार वर्षअघि पहिलोपटक आएको ‘अफर’लाई स्विकारेँ । सहअभिनेत्री भएँ । पूरै हावा तालमा । फिल्मको ‘रेस्पोन्स’ राम्रो नआए पनि मैले आफूलाई पर्दामा जाँच्न पाएँ । त्यसपछि म हिमालय टेलिभिजनमा भिजेका ...	Read More »